Tsy Ilaina Intsony ny Fampitaham-Bato! | Hevitra MPANOHARIANA |
Tsy Ilaina Intsony ny Fampitaham-Bato!
2013-12-27 @ 11:38 in Politika
Hifarana ny taona 2013, hifarana amim-pahakiviana sy amin'alahelo, nefa toa tsy hitondra fanantenana sy hafaliana akory ilay taona vaovao 2014. Tsy hoe resy izay nosafidiana dia kivy sy malahelo fa ilay halatra tamin'ny dingana rehetra sy ny sehatra mihitsy no mahatonga likiliky anaty tsy mampazoto miasa sy tsy mampazoto miresaka, ary mety ho maro ny olona tahaka izany nefa mety tsy hisy ihany koa fa izaho irery no maka lagy eo. Tsorina fa efa nivonona ny hanaiky ny voka-pifidianana aho raha tena avy amin'ny safidin'ny olona tokoa ilay izy saingy ny tsikaritra kosa tsy mamela. Rehefa miresadesaka amin'ny hafa ihany koa dia vao maika zendana amin'ny fitadiavam-pandresena amin'ny fomba rehetra ataon'ny sasany na mendrika ilay zavatra atao na tsy mendrika... fa ny tsy mendrika sy ny tsy rariny no betsaka kokoa. Tsorina ihany koa fa zary mahay ny fomba rehetra hangalaram-bato aho, na dia vao in-droa (in-telo raha miaraka amin'ny referandaoma izay tsy nandraisana anjara) monja aza isika Malagasy no nampiasa ity biletà onika na vato tokana ity. Andeha hoe hosoratana izay tadidy!
Misy ireo fomba fangalaram-bato mialoha ny fifidianana na amin'ny fanomanana moa izany izay efa nomarihako ihany saingy toa tsy misy miraharaha dia ny avy amin'ny lisitra aloha voalohany indrindra. Efa zatra ny fanaovana ny lisitra araka ny laharan-trano ny Malagasy ka avelao amin'izay ihany. Hafetsena ilay hoe mijery ny anaranao amin'ny lisitra ianao, fa ahoana kosa ny hanamarinanao fa tsy misy mpifidy hafa ankoatra anareo ao amin'ny laharan-tranonao? Tsy mbola nisy namaly io hatramin'izao. Any anefa no miainga voalohany indrindra ny fangalaram-bato raha misy olona hafa miray trano aminao, izay tsy fantatrao, nefa afa-mifidy soa aman-tsara. Nisy olona, noho ny fahazotoan'ny tao amin'ny fokontaniny nanavaka isaky ny laharan-trano sy nizara izany isan-tokantrano, nahazo karatra amin'ny anaran'olona enina tsy fantatra velively nefa dia ao anaty lisitra sy nanaovana karatra.
Manaraka izany ny fahazoan'olona maromaro karatra roa na mihoatra, dia tsotrabe ny olona namerina ireny, nefa tokony norovitina na nodorana ireny tsy ho ampiasain'olo-kafa. Re moa fa nisy ny tany ananonanona tany (tadiavo amin'ny gazety) nizara ireo karatra tsy nisy nandray hifidianan'ny olona hafa azy. Halabato efa henjana koa izay satria mandiso ny isan'ny nandrotsa-bato marina. Izay tadidy eto am-panoratana moa no lazaina fa raha mahita ianao dia tsara ny manoratra izany.
Misy koa ny fangalaram-bato mandritra ny fifidianana izay tsikaritra amin'ny endrika maro ihany koa:
Nisy ny biraom-pifidianana nahitana taratasy fotsy tsy nahitana na inona na inona rehefa nandeha ny fanisana. Hevitra tsotrabe eo noho eo ny hoe vato fotsy iny izany. Saingy ilay biletà misy laharana dia ahafahana milaza fa efa misy fikasana hanao zavatra tsy mety amin'ny fahitana iny taratasy fotsy tsy misy na inona na inona iny. Raha entin'ilay olona mody ny vato dia ataony inona? Nahoana no atakalo taratasy fotsy tsy misy na inona na inona, na mody asiana sary na soratra tsy manaiky fifidianana ohatra dia maninona? Iny taratasy fotsy iny, na ireo taratasy tsy biletà narotsaka tanaty vata ireo dia efa azo ahiahiana fa misy ny fikasana hangala-bato ao amin'io birao io, dia iny ihany no tsy mifanaraka amin'ny laharana tokony ao amin'ny birao raha misy ny fanamarinana ny laharan'ny biletà mirotsaka ao anaty vata. Mahavita zavatra be dia be anefa taratasy (iray monja) iny eo amin'ny sehatry ny fangalaram-bato ka ataoko toy ny tantara kely izany.
Raha tsy mety nahazo vato mialoha tao amin'ny birao iray izay te-hangala-bato dia mividy vato izy. Izao no ataony: entiny ny taratasy manana endrika sy habe A5 iray, satria efa nolazaina mialoha fa habe sy endrika A5 ny taratasim-pifidianana ho filoham-pirenena. Miandry eny akaikikaikin'ny biraom-pifidianana amin'izay ny mpihaza mpifidy. Mikendry olona iray na roa na mihoatra heveriny ho azo vidiana izy (aza atao mahagaga raha hiova ny vokatra eny ambany tanàna!) dia resahiny hoe: ento aty hovidiako 15.000ar na 10.000ar ny vatonareo dia omeo ahy fa ity taratasy ity arotsaka ao. Dia raha manaiky ilay (ireo) olona dia mifanakalo fotsiny ny taratasy sy ny vola dia vita ny dingana voalohany.
Dingana faharoa, asiana marika an-taratasy (feutres no be nampiasa nefa stylos ny tao anaty birao, na stylo mena na manga no nampiasaina raha stylo manga ohatra ny an'ny ao amin'ny birao) eo amin'ilay safidy hofidiana dia mijery izay olona hafa mety ho azo vidiana ihany koa ny safidiny ka ifanarahana fa entiny mivoaka ny biletà tokony arotsany fa ilay nomen'ny mpihaza olona no arotsaka. Rehefa mivoaka avy any amin'ny biraom-pifidianana indray ilay (ireo) olona dia mifanakalo biletà mbola tsy nisy marika sy ny vola nifanarahana. Mandeha noho izay ny bizina amin'iny lafiny iny satria tsy maintsy maka ny anjarany ihany koa ny mpihaza mpifidy.
Raha mahazo olona iray isaky ny adiny iray ilay mpihaza dia nahazo haza folo izy izany nandritra ny tontolo andro. Raha atsasakadiny dia efa roapolo izany. Azo marihana anefa fa saika ny maraina ny olona no nifidy fa somary nihanalalaka kokoa ny folakandro (jereo ny taham-pandraisana anjara) ka mety hahazo hatramin'ny haza iray isaky ny fahefakadiny ny mpihaza iray na isaky ny folo minitra aza,izany hoe efatra isaky ny adiny iray na efapolo ao anatin'ny tontolo andro. Izany hoe raha ny 75% monja amin'ny biraom-pifidianana no nanaovana izay hetsika izay dia manome isan'ny biraom-pifidianana 15.000 izay ka raha io no ampitomboana mpifidy 40 raha mpihaza iray isaky ny biraom-pifidianana iray ihany no kaontiana (fa mety misy mpihaza roa na telo isaky ny biraom-pifidianana io) dia efa manome isam-bato 600.000 na 15%n'ny mpifidy nandrotsa-bato.
Mariho anefa fa tamin'ny fampielezam-peo ihany dia efa nandrenesana fa lany antenantenam-potoana ny biletà, izany hoe raha tsorina dia na ny ceni-t no ninia nanao isam-bato tsy ampy na nisy niray tsikombakomba tamin'ny mpividy na mpihaza mpifidy ny mpikambana miandraikitra io biraom-pifidianana io. Tsy nilaza ny isan'ny bileta rezerva isaky ny biraom-pifidianana moa ny Ceni-t fa raha toa ka tsy ampy noho ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ny isan'ny biletà dia efa be dia be izany ny mpihaza mpifidy mijorojoro ao ivelany ao hividy safidy. Aza atao mahagaga koa noho izany raha mihoatra noho ny isan'ny mpifidy nandrotsa-bato ny isan'ny biletà tafiditra anaty vata satria mety tsy ho hitan'ny mpanamarina akory hoe roa anie ny biletà indray ampidirin'olona iray.
Resaka teny ho eny indray no nandrenesako zavatra toy izao: Naharay antso ny delege iray dia mampita ny resaka amin'ny namany mety ho azo irahina manao hoe, tsy misy mpifidy, hono, letsy izao atsy ananona ka makà ialahy sakafo any amin'ny QG hitondra sakafo ho an'ny namana ao. Resaka tsotra nefa misy zavatra ambadika ambarany, tambatambazana na ahodikodin-doha (diversion) ny ao amin'io birao io hanentsenana vato hafa na hanovana ny vata mihitsy. Meto ho mbola maro ny halatra mandritra ny fotoam-pifidianana, toy ny fividianana delege na birao fa ambadika tsy hita maso moa izy ireny.
Raisina eto ihany koa ny fangalaram-bato mandritra ny fanisam-bato, dia ny manonona anaran'olona hafa nefa hafa ny safidin'ny olona. Haingana dia haingana ny mpanisa vato mampiseho ny vato ka tsy fantatra marina na izay tokoano voamarika na tsia. Nisy nahatrarana ho nanao izany anefa tamin'ny mpanonona vato saingy toa afa-maina fotsiny izy ireny rehefa bedy am-bava.
Endrika fangalaram-bato aorian'ny fifidianana.
Eto no tena betsaka ny fangalaram-bato satria vitsy kokoa ny vavolombelona afa-manara-maso. Izao voasoratra anaty PV ihany no ekena nefa izay tena isa teny amin'ny tabilao sy voakajy tokoa ve? Fa izay tena tiako asongadina kosa dia tsy misoroka ilay endrika fangalaram-bato ahiahian'ny olona mihitsy ny ceni-t fa ny ataony ihany no ataony. Tsy afa-manao kajy indray mitopy maso mihitsy ny olom-pirenena fa tsy maintsy mamadibadika pejy na taratasy natao printy. Maninona no tsy mahasahy mampiseho ny mangarahara? Tsy hita fototra akory ny valiny ankapobeny manerana an'i Madagasikara fa efa nandalovan'ny valiny niseho tao avokoa izany hoe ny isan-jaton'ny anankiray nahazo isa be indray no kely noho ilay iray sy ny isam-baton'ny kandidà iray (fa tsy isan-jato) nihena am-pandehanana. Mandra-pahasahian'ny ceni-t mampangarahara ny vokatra ataony sy mora topazana maso indray mandeha ny vokatra rehetra dia isa petatoko natao hanamboarana ny toe-tsain'ny mpanara-baovao hanaiky ny fampandresena ny kandidà iray fotsiny no ataon'ny ceni-t. Efa hatramin'ny namoahana ny vokatra voalohany indrindra no nanaovany io fihetsika io.
Raha misy anefa ny fampihenana vato ataon'ny CES rehefa foanana ny vokatra farany dia ny isa ankapobeny izay lazaiko fa PETATOKO io fotsiny no anesorana ilay vato foanana fa tsy hiainga amin'ny fanisana hatramin'ny voalohany miainga amin'ny birao, fokontany, distrika, faritra mihitsy izy. Izany no mahatonga ahy hamintina sy nanao ny lohateny hoe "Tsy ilaina intsony ny fampitaham-bato" io satria isa petatoko apetraka fotsiny io fa tsy niainga avy amin'ny safidin'ny olona velively. Ivereno vakiana indray ilay filazalazana nataoko tamin'ny fizotran'ny fivoahan'ny valim-pifidianana tamin'ny fihodinana voalohany dia hazava tsara aminao ny antony namoahako io filazana io.
Jentilisa 27 desambra 2013